Maajo | 2007 | WEEJIDOW
Archive for Maajo, 2007
Qarax dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay deegaanka Buuloguduud ee duleedka magalada Kismaayo.
Maajo 24, 2007
Ugu yaraan hal qof ayaa geeriyooday labo kalena waa ay dhaawacantay kadib markii qarax uu ka dhacay deegaanka Buuloguduud ee duleedka magaalada Kismaayo halkaasoo fariisin ay ka sameysteen guddoomiyaha gobolka Jubbada hoose iyo kan degmada Kismaayo iyo ciidamadii laga saaray magaalada Kismaayo.
Qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhashay xabad baasuke oo ku qaraxday askari ka tirsan ciidamada DFKMG ee ku sugan deegaanka Buulogaduud taasoo sababtay in uu geeriyoodo askarigii xabadu ka qaraxday isla markaana dhaawaac uu soo gaaro 2 askari oo kale.
Goob jooge ku sugan deegaanka Buuloguduud ayaa sheegay in shilkaasi uu u dhacay si kama’ ah, isagoo xusay in askariga baasukaha ku qarxay uu jirkiisa go’ go’ay halka labada dhaawaca uu sheegay in dhaawacyadooda lagu dabiibayo cusbital ku yaal deegaanka inkastoo dhaawacyo culus ay soo gaareen.
15kii May ayay ahayd markii miinada kaawooyinka ay ku qaraxday nin farsameynayay taasoo sababtay in sidoo kale haweeney ka agdhaweyd ay ku geeriyooto 2 kalena ay ku dhaawacanto qaraxaasi xilli ninkaasi uu farsameynayay miinada.
MUQDISHO: Ganacsade Bashiir Raage Shiiraar oo dalka dib ugu soo laabtay isagoo ah isku xiraya Dowladda iyo AMISOM
Ganacsade Bashiir Raage Shiiraar oo ka mid ahaa aasaasayaashii isbahaysigii laga awoodda roonaaday ee la dagaalanka Argagaxisada, kaddib ku dhawaad hal sano uu ka maqnaa Muqdisho.
Ilo wareedyo ku dhowdhow Bashiir Raage ayaa sheegaya inuu wato darajo uu ka wado AMISOM oo ah inuu yahay isku xiraha AMISOM iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaana uu ka soo duulay dalka Uganda, gaar ahaan Caasimadda dalkaas ee Kampala, isagoo halkaas ku sugnaa tan iyo intii uu ka baxay dalka.
Ganacsade Bashiir Raage Shiiraar ayaa waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Muqdisho taageerayaashiisa, waxaana uu kula hadlay saxaafadda garoonka diyaaradaha isgoo sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu dib ugu soo laabto Muqdisho.
Gawaarida dagaalka oo aad u fara badan ayaa lagu soo dhaweeyay Ganacsade Bashiir Raage Shiiraar iyadoo aysan jirin hoggaamiye kooxeed ka mid ah kuwii ay iskula jireen Isbahaysigii Burburay oo ku soo dhaweeyay garoonka, waxaase dadka soo dhaweeyay ay ahaayeen taageerayaashiisa oo qura.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir isla markaana ah Duqa Muqdsiho Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere) wata gawaarida dagaalka ayaa uga hortagay waddada ganacsada Bashiir Raage Shiiraar iyo taageerayaashiisa oo la socday.
Bashiir Raage ayaa u gudbay gurigiisa oo ku yaalla Xaafadda Shibbis ee Gobolka Banaadir, waxaana lagu wadaa inuu saxaafadda u qabto shir jaraa’id isagoo ka hadli doona sababta dhabta ah ee uu ugu soo laabtay Muqdisho, kaddib muddo sannad ku dhow oo uu dibadda uga maqnaa.
War Deg Deg ah: Qarax xoogan oo xalay ka dhacay Saldhiga Degmada Hurwaa Xili uu Max’ed Dheere Bandow saaray ( Maxaa ka jira in Degmada Hurwaa ay isku haystaan Beelaha Ceyr iyo Duduble)
3 qof ayaa ku geeriyooday tiro ku dhow 5 kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray Qarax xoogan oo xalay ka dhacay agagaarka saldhigga booliska ee degmada Heliwaa ee magaalada Muqdisho, xili la saaray bandow habeenimo.
Qaraxaan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa ruxay agagaarka saldhigga degmada Heliwaa, waxaana dhibaato xoogan ay ka soo gaartay dadka rayidka ah ee ku sugan deegaankaasi oo lala eegtay
Qaraxaan oo dhacay fiidnimadii xalay ayaa waxaa la sheegay in lagu dhuftey meel aan ka fogeyn saldhigga booliska degmada Heliwaa sida aY sheegeen dadka deegaanka
Warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in ay isku haystaan Gudoomiyanimada Degmadaas Beelaha Ceyr iyo Duduble , waxaana sidoo kale xaaladaan ay u dhaxeysaa labada hogeemiye kooxed ee ay ka soo kala jeedean labadan beel waa C/Nuure Siyaad (Cabdi Waal) iyo Bootaan Ciise Caalim ( Xaaran ku naax)
Is haysadka labadan beel ee Degmada Hurwaa ayaa ah mid la xiriirtaa dilkii loo geystay Gudoomiyihii hore ee Degmada.
Shiikh Shariif Shikh Axmed iyo Shariif Xasan Shiikh Aadan oo sheegay in aan Shir Dib-u-heshiisiin ah lagu qaban karin Soomaaliya
Waxaa si wada jir ah Warsaxaafadeed uga soo saaray Magaalada Asmara ee Dalka Eritrea Golaha Maxaakimta Islaamiga ah iyo Xubnaha Baarlamaanka Xorta ah ee ku sugan dalkaas, waxaa sida ku xusan warsaxaafadeedka ay labada dhinac soo saareen oo soo gaaray Xafiiska Warqabadka HOL ee magaalada Muqdisho.
Warsaxaafadeedka ay soo saaree labada dhinac oo ay ku wada saxiixnaayeen Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Shariif Xasan Shiikh Aadan iyo Guddoomiyaha Golihii Maxkamadaha Islaamka Shiikh Shariif Shiikh Axmed ayaa waxaa uu u qornaa qaabkan:
Xaaladda Dalka Soomaaliya
Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed waxa ay u gacan galeen cadow gumaysi ah kadib markii ciidamada Nidaamka Addis-ababa ee Meles Zenawi uu madaxda ka yahay ay ku soo duuleen, qabsadeenna dalka Soomaaliya.
In lagu sharciyeeyo gumeysiga dalka qabsaday
In u adeegayaasha gumaystuhu ay ku nolol dheereystaan, isukna muujiyaan dad dib-u-heshiisiin ku hawlan.
In Umadda Soomaaliyeed looga jeediyo halganka iska caabinta gumeystaha iyo dib-u-xoreynta dalkooda.
In wax shir ah oo dib u-heshiisiin ah uusan dhici karin inta dalka Soomaaliya uu gacanta ugu jiro gumeystaha taliska Ethiopia.
Waxaan qabnaa in dib-u-heshiisiin run ah oo dhammeysa khilaafaadka siyaasadeed ay imaan karto dadka soomaaliyeed oo u madax banaan danahooda in ay ka tashadaan iyagoo aan gumeysi gacantiis ku jirin.
Sidaas darteed waxaanu ugu baaqeynaa Ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba in aysan dheg jalaq u siinin qorshayaasha gumeysigu u adeegsanyo kuwa uu ku shaqeysto, ayna ka fogaadaan ka qeybgalka shirweyne ku sheega dib-u-heshiisneed ee loo muddeeyay 15-june 2007. Sidoo kale waxaan beesha caalamka gaar ahaan dawladaha iyo hay’adaha deeqda bixiya ugu baaqeynaa in aysan gacan siinin, dhaqaalana ku bixin mashruucaas gumeysigu ku xalaaleysanayo haysashada dalka Soomaaliyeed.
Waxaannu soo dhaweyneynaa mawqifyadii siyaasadeed ee u dambeeyay ee ka soo baxay shirkii golah Wasiirada Arrimaha Dibadda Midowga Yurub iyo baaqii ka dambeeyay ee ka soo baxay Wasiir ku xigeenka Arimaha Dibada dawlada Talyaaniga Patrizia Sentinella oo ku saabsanaa in ay ciidamada gumaysiga Itoobiya si shuruud la’aan ah uga baxaan dalka Somaaliya.
Waxaanu Beesha Caalamka iyo Qaramada Midoobay ka codsaneynaa dardargalinta baarista iyo sharci horkeenidda dambiilayaasha dagaal ee ku xasuuqay Shacbiga Somaaliyeed magaalo madaxda Muqdisho, iyo magaalooyinka kale ee dalka oo ay ku cadaato in ay lug ku leeyihiin xasuuqa, waxaan sidoo kale eedeyneynaa hor istaaga iyo carqaldeynta lagu hayo hawlaha loogu gurmanayo dadka ka barakacay iyo kuwa ku tabaaleysan gobolada dalka gaar ahaan agagaarka Muqdisho sida Hay’adaha samafalkuba ay cadeeyeen.
Ugu dambayntii waxaan shacbiga Soomaaliyeed ku boorineynaa in ay dar dar geliyaan halgankooda ay ku soo dhacsanayaan gobanimadooda iyo madax banaanidooda.
Guddoomiyaha Maxkamadihii Islaamka
Guddoomiyihii Hore ee Baarlamaanka Soomaaliya
Guddoomiyaha G/Banaadir oo sheegay in berri laga bilaabo ay ammaanka Magaalada Muqdisho la wareegi doonaan Ciidamo Boolis ah
Khamiis, May 24, 2007(Waajid.Wordpress.com): Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, ahna Duqa Magaalada Muqdisho Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere) ayaa shaaca ka qaaday in laga bilaabo maalinta berri ah ay ammaanka Magaalada Muqdisho la wareegi doonaan Ciidamada Booliska Soomaaliyeed.
Maxamed Dheere waxaa uu sheegay in Ciidamada haatan jooga waddooyinka Magaalada Muqdisho la geyn doono xerooyin ka baxsan Magaalada, iyadoo magaaladana ay ka howlgeli doonaan Ciidamo Boolis ah oo ka kala imaanaya Saldhigyada iyo Degmooyinka Gobolka Banaadirl, kuwaasi oo yeelan doona Ciidamo Gurmad ah oo deg deg uga howlgala meeshii looga yeero.
Ciidamada Booliska ah ee maalinta berri ah ka howl bilaabi doona Magaalada Muqdisho ayaa waxay bedelayaan Ciidamo tiro badan oo is-barbar yaacayay, kuwaasi oo ku labisnaa dhar noocyo kala duwan leh, iyadoo mararka qaarkoodna ay dhici jirtay in ay kooxo Burcad ah soo labistaan dhar la mid ah midka ay heystaan Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Maxamed Dheere waxaa uu sheegay in Ciidamada Booliska ah ee Magaalada Muqdisho ka howl bilaabi doona ay yihiin kuwo tababar soo qaatay oo anshaxoodu uu aad u wanaagsan yahay, isla markaana wax weyn ka bedeli doona ammaanka Magaalada Muqdisho, isagoo dadkana ugu baaqay in ay Ciidamadaas la shaqeeyaan.
Si kastaba arrintu ha ahaatee, Dadka ku dhaqan Magaalada Muqdisho ayaa tan iyo markii Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya la wareegeen gacan ku heynta Gobolka Banaadir ayaa waxaa ay ka cabanayeen amni darro ka timid dhinaca Ciidamo ka amar qaata Dowladda Federaalka, kuwaasi oo falal dhac ah u geystay Dad ay ku qabteen meelo Koontaroollo ah oo la dhigay.
War Deg Deg ah: Weerar lagu qaaday caawa Saldhiga ciidanka Booliska ee Xaafada Huriwaa
Maajo 23, 2007
Muqdisho:Weerar loo adeegsadey Bam ayaa waxaa goor dhaweyd lagu weerarey Saldhiga Ciidanka Booliska ee Xaafada Huriwaa oo fariisin u ah Ciidamada DFKM.
Weerarkaan markii uu dhacay ayaa waxaa la maqlay dhawaqa rasaasta oo ay
is weydaarsadeen Ciidanka Booliska ee Xaafada Huriwaa iyo kooxdii weerarka ku soo qaadey rasaastaas oo socotey qadar daqiiqado ah.
Weerarada lala beegsanayo Xarumaha ay degan yihiin ciidanka Itoobiya iyo kuwa DFKM ayaa soo badanay, iyadoo weerarkii ugu danbeeyey ay xoogaga wax iska caabintu ay ku qaadeen wasaaradii hore ee gaashaan dhiga.
Xoogagga wax iska caabinta ayaa horay u sheegay inay badeli doonaan tabaha Xeeladaha dagaalka, iyagoo sheegay inay weeraro culus la beegsan doonaan fariisamaha Ciidamada itoobiya.
Weerarkaan lagu qaadey Saldhiga Huriwaa ayaan ilaa hadda la garanaynin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay, iyadoo markii weerarkan uu dhacay ay
Ciidanka Booliiska Huruwaa ay rideen rasaas xad dhaaf ah.
Beesha Digil oo kasoo horjeesatay maamulka loo magacaabi rabo Shabeelaha Hoose.
Kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen Odayaasha dhaqanka, Waxgarad iyo Siyaasiyiinta ee beesha Digil ayaa waxaa ay shaaca kaga qaadeen in gabi aahnba ay kasoo horjeedaan maamulka ladoonayo in gobolka Shabeelaha Hoose loo sameeyo.
Odayaasha Beesha ayaa waxa ay sheegeen in aysan ahayn mid sharciga waafaqsan qaabka maamul loogu samaynayo Shbeellaha Hoose, kaasoo ay ku tilmaameen in rag gooni ah oo anan u dhalan gobolka ay doonayaan in ay Gobalka maamulaan.
Suldaanka beesha Digil suldaan Xasan Caliyow Beere ayaa waxaa uu Idaacada Simba u sheegay in gabi aahanba ay maamulkaasi kasoo horjeedaan oo xaqooda laduudsiiyay, islamrkaana dad uu sheegay in aysan gobalka u dhalan ay doonayaan in wixii ay saami u lahaayeen ku takrifalaan.
Sidookale taliyaha ciidamada beesha Digil Sayid Cumar ayaa isgana waxaa uu u sheegay Idaacad Simba in Dowladda KMG ah ee Somalia ay taageersan yihiin, balse uu sheegay in dowladdu aysan u soojeedin xiligan in waxii ay ku lahayeen maamulka gobolka Shbeelaha Hoose ay siiso.
Waxaa uu tilmaamay Sayid Cumar in Dowladda KMG ay ku taagereen inkaban kun askari oo beeshooda ah, kuwaasi oo ay geeyeen xerada Balidoogle, sidaasi oo jirtana ayuu yiri wali waxba nooma qabanin Dowladda KMG.
Dalka Kuwait oo joojiyay xoolihii looga dhoofin jiray Soomaaliya iyo guud ahaan Africa
Dalka Kuwait ayaa xayiraad ku soo rogay xoolihii looga dhoofin jiray dalka Soomaaliya iyo guud ahaan qaarada africa .
Talaabadaani ayay dowlada Kuwait u cuskatay sida laga soo xigtay wakaalada wararka dalkaasi ee Kuna in xoolaha nooca ariga ee Soomaaliya iyo africa ay qabaaan cudurka Rift Valley.
Go`aanka dalka Kuwait ayaa ku soo beegmeysa xilli la fashaliyay in dooni siday ari laga qaaday Soomaaliya la giliyo gudaha Kuwait ka dib markii la xaqiijiyay in ay qabaan cudurka Rift Valley.
Hay`adda guud ee ariamaha beeraha ee dalka Kuwait ayaa mulkiilayaasha shirkadaha ka codsatay in ay kala shaqeeyaan sidii looga hor tagi lahaa faafitaanka cudurkaasi Rift Valley si loo badbaadiyo nolosha muwaatiniinta dalkaasi .
Dalka Kuwait ayaa ka mid ahaa dalalka qaliijka ee loo dhoofin jiray xoolaha dalka Soomaaliya , mana jiraan wax jawaab oo ka soo baxay ilaa iyo haatan dhanka dowlada KMG ah ee Soomalaiya .
Maxamed Dheere oo odayaasha Beelaha Hawiye ku eedeeyay inay ka dambeeyaan weerarada iyo qaraxyada loo geysanaayo Mas’uuliyiinta Dowladda KMG ah
Gudomiyaha G/banaadir ahana duqa Magaalada Muqdisho Maxamed umar Xabeeb [M/dheere] ayaa si buuxda u cadeeyay in qaraxyada iyo weerarda loo geysanaayo Mas’uuliyiinta dowladda ay ka dambeeyan wax uu ugu yeeray Odayaasha beelaha Hawiye.
M/dheere oo hadalkaan jeediyay xilli uu shir a lahaa dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo iyaga loo xilsaaray Tirakoobka caasimada Muqdisho dadka degan, wuxuuna kulankaas Maxamed Dheere ka sheegay in xubnaha sheegta inay yihiin Odayaasha Hawiye ay garteen inay iyagu ka dambeeyaan Qaraxyada ka dhaca Magaalada Muqdisho ayna gacan siiyaan haraadigii Maxkamadaha.
” Odayaasha Hawiye sheegta ayaan ogaanay inay yihiin kuwa ka dambeeya Qaraxyada ka dhaca Muqdisho, waxaanu xaqiiqsannay inay ka dambeeyaan qaraxyada Muqdisho” ayuu yiri Maxamed Dheere oo intaas ku daray “Kooxihii ka haray Maxkamadaha ayaa waxay ku jiraan Suuqa bakaaraha, waxaana gacan ku siiya Qaraxyada Odayaasha Beelaha Hawiye oo iyagu doonaya inay siyaasad ahaan uga faaiideystaan”.
Gudoomiyaha G/banaadir Maxamed Dheere ayaa sidoo kale ku hanjabay inay tallaabo ka qaadi doonaan odayaasha haddii aysan ka waantoobin howlaha qarxinta ah ee ay abaabulayaan, wuxuuna cadeeyay inaysan howshan ay wadaan aysan waxba ku gaareen, isla markaana ay talaabo ka qaadi doonaan.
Dhinaca kale, Axmed Diiriye oo ah Afhayeenka Odayaasha uu Maxamed Dheere eedeeyay ayaa waxay ku tilmaameen eedeynta Maxamed Dheere inay tahay mid aan sax ahayn loona baahan yahay in Maxamed Dheere uu ka fiirsado, waxayna sheegeen inaysan jirin Qaraxyo ay abaabulaan ayna Dowladda taageersan yihiin, islamarkaan aya mar walba iyagu la hadlaan shacabka si amni iyo kala dambeyn loo helo.
Madaxweyne Geelle, oo uu ku baaqay Kooxaha isku haya dalka Somalia, inay is-xakameeyaan, una diyaar-garoobaan Shirweynaha Dib-u-heshiisiinta Qaranka
Madaxweynaha dalka Jabuuti, Md. Ismaaciil Omar Geelle, ayaa hadalkaasi ka sheegay Shirweynaha Madaxda Dowladaha ku bahoobay Ururka Ganacsiga Guud ee Bariga iyo Koonfurta Afrika “COMESA’ oo haatan ka socda Casimadda dalka Kenya ee Nairobi, wuxuuna ku booriyey Madaxda Ururkaasi in si degdeg ah loo bilaabo Shirweyne ballaaran oo gaar ah oo looga xaajoonayo sidii Xaallad caadi loogu soo dabaali lahaa Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Somalia.
Madaxweynaha dalka Jabuuti, waxa uu sheegay inay rumeysan yihiin inay tahay waqtigii ugu dambeyey ee la caawimi lahaa Somalia, si ay Shacbiga Somalia dib u dhistaan Noloshooda, wuxuuna carrabka ku dhuftay inay soo dhaweynayaan Tallaaabadda wanaagsan ee ay DKMGS ku doonayaan inay Kooxaha Soomaalida kala xaajoodaan sidii loo xalin lahaa khilaaqfyadda taagan.
Madaxweyne Geelle waxa uu ku baaqay dhamaan Kooxaha isku haya dalka Somalia, inay is-xakameeyaan, isla markaana ay u diyaar garoobaan Shirweynaha Dib-u-heshiisiinta Qaranka ee la qorsheeyey inuu Bartamaha bisha soo socoto ka furmo Magaalladda Muqdishu.
Madaxweynaha dalka Jabuuti, Md. Ismaaciil Omar Geelle, waxa uu u sheegay Labaatanka dowladood ee xubnaha ka ah Ururka KOMESA ee kulanka labada maalmood ku leh Mafgaalladda Nairobi inay xaallada Somalia haatan soo hagaagayso inkastoo uu xusay inay weli socdaan weeraro ka dhan ah ciidamada AMISOM.
Madaxweynuhu, waxa uu ugu baaqay Hoggaamiyayaasha dalalka ku bahoobay Ururka Ganacsiga ee Bariga iyo Koonfurta Afrika “COMESSA” inay gacan ka geystaan sidii loo abuuri lahaa xaallad lagu qaban karo Shirweyne Dib-u-heshiisiin Qaran oo loo dhan yahay., oo ka dhaca Magaalladda Muqdishu.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Maajo, 2007.